Indlu epholileyo ejonge kwisitrato seProfessionalnaya
Ndicebisa ukuba uhlale kwigumbi elipholileyo elikwisakhiwo esitsha kwisitrato esisembindini wesixeko. Apha uya kufumana indlela yokuphila yanamhlanje, intuthuzelo, ucoceko kunye nokwamkela iindwendwe.
Indlu yestudio eyahlukileyo enekhitshi kunye negumbi lokuhlambela lifikeleleka ngokupheleleyo kwiindwendwe
Indawo yethu ibekwe kakuhle kakhulu. Zonke izinto ezinomtsalane zinokufikelelwa ngeenyawo.
Ngaphakathi komgama wokuhamba kukho i-Ice Palace, iZiko leHockey ye-Ice, i-Figure Skating and Curling Centre, i-Dolphin swimming pool, i-Extreme sports and entertainment park, i-fitness club, i-shopping centre ye-Dmitrovsky kunye neziko lokuthenga i-Albatros.
Kuya kuthatha imizuzu eyi-10-15 ukuhamba ukuya kwi-Dmitrov Kremlin Museum-Reserve, indawo yembali, isitalato se-Kropotkinskaya esihamba ngeenyawo, i-Assumption Cathedral, i-P. Kropotkin House-Museum, i-Birch Grove City Park yeNkcubeko kunye nokuphumla.
10 imiz. ngeteksi okanye ibhasi - iDmitrov Institute of Continuing Education "DINO Dmitrov", isebe laseDmitrov leKholeji yezoNyango yeNgingqi yaseMoscow, iKholeji yaseDmitrov.
Kwiikhilomitha ezili-10-15 kukho iipaki zezemidlalo zezemidlalo - "Volen", "Yakhroma", "Sorochany", Shukolovo, Stepanovo, club ye-ski L. Tyagacheva
Ndidibana ngokobuqu kwaye ndibone iindwendwe. Ndinxibelelana nokusombulula imiba yangoku